Iibsashada ama cusboonaysiiyo shatiga xayawaanka - King County
Regional Animal Services of King County (RASKC) Sidee ku caawin karnaa?
Iibsashada ama cusboonaysiiyo shatiga xayawaanka
Barnaamijka korinta xayawaanka Waxaa iga dhumay xayawaankayga Waxaan soo helay xayawaan baadi ah Iska soo wareejinta xayawaanka Jawaab celinta xakamaynta xayawaanka
Sidee ku caawin karnaa?
Ma ogtahay in? Bixinta kharashka shatiga xayawaankaaga ay ka caawiso RASKC in ay maalgeliyaan howlaha nafta lagu badbaadinayo. Sannad kasta, RASKC waxay siisaa kumanaan xayawaan ah fursad labaad iyagoo siinaya daryeel tayo sare inta ay joogaan Xarunta Korinta xayawaanka.
RASKC ma bixiyaha adeegga ruqsada xayawaankayga?
Xaqiiji deegaankaaga adigoo ku qoraya ciiwaankaaga.
Is RASKC your service provider for pet licenses?
Select to use your current location
Laakiin waxaa ugu muhiimsan: Taaga anigu i badbaadinayaa! Haddii aan dhumo, qofkii i hela wuxuu wici kartaa lambarka ku qoran taagayga oo wuxuu heli karaa macluumaadkaaga xiriirka 24ka saac ee maalintii, 7 maalmood ee usbuuca, iyo si degdeg ah ayaanu dib ugu midoobo karnaa.
Bixinta Shatiyada Xayawaanka ee Online-ka Cusboonaysii macluumaadkayga
Хотите сделать пожертвование? Узнайте, как вы можете помочь нам!
Yaa u baahan ruqsada xayawaanka ee King County?
Ruqsadaha xayawaanka King County ayaa looga baahan yahay dhammaan eyda iyo bisadaha siddeed toddobaad jirka ama ka weyn ah ee ku nool aagga degaanka Adeegyada Xayawaanka Gobolka. Ruqsada xayawaanka waxay tilmaamaysa iyo badbaadinaysaa haddii uu eeygaada ama bisadaadu lumaan. Inta waxa dheer in, ruqsadaha xayawaanka ay bixiyaan faa’iidooyin fara badan oo dheeraada.
Xitaa bisadaha ama xayawaanka ku eg deyrka kaliya wey dhumi karaan iyo ruqsadahoodu waxay ka caawin kartaan sidii dib lagugu soo celi lahaa. Shatiyada waa aqoonsi aan qaali ahayn oo waa badbaadinta iyo ammaanka xayawaankaaga ah. Dakhliga shatigu wuxuu sidoo kale ka dhigaya mid suuraggala in dib loogu celiyo xayawaanka lumay qoysaskooda iyo adeegyada korinta xayawaanka guri la'aanta.
Waa maxay faa’iidada ruqsada xayawaanka?
Xayawaanka la helo waxaa si degdega dib loogu celinayaa milkiilahooda. Lambarka xafiiska shatiga xayawaanka wuxuu ku yaala shatiga. Haddii uu qof soo helo xayawaankaaga, waxay wici doonaan lambarka, si ay u helaan macluumaadka lagala soo xiriiri karo, xataa saacadaha dambe, oo dib ayay kugu soo celin doonaan xayawaankaaga.
Xayawaankaadu wuxuu heli doona guri u soo kaxayn lacag la'aan ah marka ugu horeysa ee la soo helo. Shaqaalaha degmada ayaa isku dayi doonta inay si degdega gacanta idiinku soo geliyaan xayawaanka gurigaada, si ay kugu badbaadiyaan inaad safar u soo gasho xarunta xayawaanka.
Xayawaankaadu wuxuu heli doona daryeel muddo dheer ah. Marka la soo helo, xayawaankaaga ruqsada leh waxaa si ammaan ah loogu daryeeli doonaa Xarunta Korinta Xayawaanka muddo dheer.
Adiga iyo xayawaankaadu waxaad heli doontaan Ogaysiinta Fasaxa Xayawaanka. Marka aad guriga uga baxayso fasax, wac 206-296-2712 si aad u diiwaangeliso meesha xayawaanku joogi doono inta aad ku jirto fasaxa, cida daryeeli doonta xayawaankaaga iyo halka laga heli karo haddii lagu baahdo. Waxaanu wici doonaa lambarka saxda ah haddii xayawaankaadu lumo inta aad fasaxa ku jirto.
Lacagta shatigu wuxuu taagyeera dib ugu celinta boqolaal xayawaanka baadida guryahooda oo waxay caawiyaan in la siiyo kumanaan xayawaanka guri la'aanta qoysas cusub sannad kasta. Lacagta shatiga xayawaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu maalgeliya baaritaanada dayacaada xayawaanka ama naxariisdarada, barnaamijyada dhufaynta/ka dhigida ma dhalaanka si loo yareeyo xayawaanka oo ka bata dadka, iyo adeegyada waxbarashada bulshada.
Halkee ka heli karaa shatiga taaga ama u diraha shatiga (license mailer)?
Waxaa jira in ka badan 300 oo goobood oo ku haboon, oo ay ku jiraan hoolalka magaalooyinka badankood iyo dukaammada QFC, ee King County halkaas oo aad ka iibsan karto shatiga xayawaanka ama ka heli karta mailer. Ka fiiri bogga goobaha shatiga meesha kugu dhow.
Waa imisa qiimaha shatiga xayawaanka?
KHARASHKA GUUD EE SHATIGA XAYAWAANKA
Ka yar 6 bilood, 6 bilood ku dhacaya
Labedalay (Dhufaanan / Dhalayn)
Caddeyn u baahan
Aan la bedelin
U qalma foojada dhufaanaan / dhalayn
Dadka Waayeelka (xayawaanka dhufaanay oo kaliya)
Cadee waayeelka inuu yahay 65 ama ka weyn. Cadee xayawaanka in la soo dhufaanay ama uu yahay midaan dhalayn.
Qofka Naafada (xayawaanka labedelay keliya)
Foomka cadeeynta u qalmida ayaa loo baahan yahay
Taaga dhumay, ama dhacay
Waa meeqa kharashka la soo daahida?
KHARASHKA LA SOO DAAHIDA EE SHATIGA XAYAWAANKA
Kharashka La Soo Daahida
Maalmaha Ka Soo Wareegay Dhicitaanka
45 - 90 maalmood
91 - 135 maalmood
136 - 364 maalmood
$30 + kharashka mudada sanooyinka shatiga
Ma jiraan ganaax ah xayawaan aan lahayn shatiga?
Haa, ganaaxa xayawaanka aan shatiga lahayn waa $ 125, xayawaanka ma ladhayska/ dhufaanan, iyo $ 250 xayawaanka aan waxba laga bedelin
Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo (FAQs)
Xayawaankeyga waxaa ka lumay taagiisii. Maxaan sameyn kara?
King County waxay hadda soo saarta taagag joogto ah, kana sameeysan birta aan miririn ee loogu tala galay in nolosha xayawaanka oo dhan ay jirto. Si kastaba ha ahaatee, haddii xayawaankaaga uu lumiyay taaga shatiga, kaliya noo soo dir lambarka taaga AMA magacaaga, ciiwaankaaga, iyo magaca xayawaanka oo ay weheliyaan jeeg $ 5 (ama tag mid ka mid ah goobaha shatiga ku haboon laga bixiyo). Waxaan kuu soo diri doonaa taag cusub.
Ma jiraan wax qiimo dhimisa oo loogu talagalay dadka waayeelka ah? Waa sidee xayawaanka ka yar lixda bilood?
Haddii aad ka weyn tahay 65 jir, ama haddii xayawaankaadu ka yar yahay 6 bilood jir, waxaad u qalmi kartaa ka dhimista kharashka shatiga xayawaanka.
Haddii aad ka weyn tahay 65 sano jir
Haddii xayawaanka uu yahay mid maladhays/dhufaanaan, waxaad xaq u leedahay ka dhimista kharashka shatiga xayawaanka ee muwaadinka waayeelka. Kharashka shatigu waa $ 15.00 iyo waxaa la cusboonaysiiya sanad walba mar. Fadlan keen caddaynta da'daada iyo caddaynta ah in xayawaanka uu yahay mid ma dhalaysa/dhufaanan.
In xayawaanku ka yar yahay lix bilood jir
Haddii xayawaankaadu ka yar yahay 6 bilood jir, waxad u qalanta shatiga xayawaanka carruurta oo ah $ 15 dollar oo shaqaynaya 6 bilood. Markaas kadibna, lacagta shatiga xayawaanka buuxa ee $ 30 xayawaanka ma dhalayska/dhufaanan ama $ 60 oo ah kharashka xayawaanka aan waxba laga bedelin ayaa la bixinaya.
RASKC ma ku iibiyaan shatiga xayawaanka albaab-ilaa-albaab?
Haa. King County canvassers ayaa ugu sameeya kara shatiga eeygada(haada) iyo/ama bisada(haada) iyagoo albaabkaaga jooga. Tani waxay ku noqonaysa adiga faa'iido weyn, oo siinaysa difaac weyn xayawaankaaga. Shaqaalaha Canvassers-ka waxaa laga yaabaa inay ku soo booqdaan haddii aad ku nooshahay meel kasta goobaha adeegeena.
Shaqaalaha canvassers-ka ah ee shatiga xayawaanka waxay leeyihiin aqoonsi rasmi ah oo sawirka King County ah oo waxay xirtaan funaanado Polo baluuga oo dhalaalaya ama windbreakers ama jaakada qabowga oo leh calaamadaha (logos) shatiga xayawaanka. Saacadaha guud ahaan waa Axadaha 12:00 p.m. ilaa 8:00 p.m., Isniinta - Jimcaha 4:30 ilaa 8:30 p.m. iyo Sabtida 10:00 a.m. ilaa 7:00 p.m. Suuq-geeyayaasha taga albaabada guryaha KUMA aqbalaan lacag albaabka, laakiin waxay sameeyaan taagag shati oo ku meelgaar ah oo lacag la'aan ah oo ay tahay in la cusboonaysiin maalinta ugu dambeysa ee bisha soo socota. Tani waxay siinaysa bisadaada iyo eeygaaga badbaadin degdeg ah. Marka suuq-geeyayaasha taga albaab-ilaa-albaabku ay yimaadaan albaabkaaga, fadlan isaga ama iyada soo dhoweey.
Sidee ayaan shatiga ugu sameeya xayawaanka adeega? Tani macnaheedu ma waxa weeye in lacagta shatiga xayawaanka laga dhaafay?
Haddii aad qabtid naafo oo aad isticmaasho xayawaanka adeegga si uu ku caawiyo, waxa aad heli kartaa shatiga xayawaanka King County oo lacag la'aan ah. Iyadoo uu la socoto arjiga shatiga xayawaanka oo dhammaystiran, waa in aad ku soo dartaa caddeyn saxiixan oo qoraal ah oo sheegaysa inaad qabto naafo iyo in xayawaanka aad u isticmaasho si uu ku caawiyo sababo la xiriira naafadaada darteed. Marka aannu helno xaqiijintaada, shati bilaash ah ayaa lagu soo diri doonaa.
"Xayawaanka adeegga" waxaa lagu qeexaa Xeerka County King sida xayawaan la tababaray ama loo tababaray in ay u gargaartaan qof kaasoo indha la', dhagaha ka culus, ama haddii kale dadka naafada ah oo loo isticmaalo ujeeddadaas oo ka diiwaan gashan urur adeegga xayawaanka lagu aqoonsan yahay.
Iyada oo lacag shatiga xayawaanka laga dhaafi, haddana waxaad heli doontaa ogeysiis ah cusboonaysiinta sanadlaha oo lagaga codsanayo in aad soo xaqiijiso in xayawaankaaga aad weli u isticmaalayso sida xayawaan adeeg ahaan. Haddii aad xayawaanka sii haysato kadib markii uu ka fariisto adeega, lacagta shatiga xayawaanka sanadlaha ah ayaa laga doonaya.
Anigu hadda mar dambe ma haysto xayawaan. Maxaan sameyn kara?
Ku soo gudbi macluumaadka cusub online, ama ka wac xafiiska shatiga xayawaanka RASKC 206-296-2712.
Ma u baahannahay inaan u qaado shati xayawaankayga la xariira ganacsiga?
Dadka leh dukaammada eeyaha ee hiwaayadda iyo koriyayaasha ama ganacsiga la xiriira adeegga eeyaha waardiyayaasha aagga ee RASKC waxaa laga doonaya ruqsad gaar ah. Ka soo maanguurso qoraalka xayawaanka la xiriira ganacsigawixii faahfaahin ah, ama ka wac 206-296-7387 wixii macluumaad dheeraad ah.
Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County ayaa sidoo kale dejisa iyo bixisa fasaxaada ganacsiyo badan oo xayawaanka la xiriira oo ay ku jiraan dukaammada xayawaanka, quraaradda kalluunka, ganacsiga kennelada iyo koriyayaasha, nadiifiyayaasha xayawaanka, xanaanada eeyga, hoyga xayawaanka, dukaammada cuntada xayawaanka qaarkood, iyo ganacsiyada sida dukaammada iibinta cuntada digaagga nool. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegyadan, fadlan booqo bogga internetka ee Qaybta Caafimaadka Dadweynaha Ganacsiga Xayawaanka.
Adeegyada Xayawaanka ee Degaanka King County (RASKC)
Isniinta ilaa iyo Jimcaha: 12 pm – 6 pm
Sabtida iyo Axadda: 12 pm – 5 pm
Ka hel tilmaamaha
Qadka Macluumaadka Xayawaanka